Semalt Expert: Nzira Yokugadzira Dhizinesi Yenyu Dzakabudirira Sei
Maererano nekutsvakurudza kwakaitwa naMIT Sloan Management Review uye Deloitte UniversityDhinda, mabhizimisi akawanda akagadzirira kuenda kuIndaneti. Muchidzidzo ichi, inenge 44% yevanhu vakaongororwa (3700 vaongorori, vatariri nevatungamiriri),vakaita kuti zvive pachena kuti makambani avo akanga akagadzirira kupesana kwekushanda mushure mekutangiswa kwenzira itsva dze digital. Zvisinei, 56% yeVakapindura havana kunzwa vakagadzirira kuchinja kwenjodzi nekupikisa nzira itsva.
Kugamuchira nzvimbo ye digital kunogona kureva zvakawanda mubhizinesi. Somuenzaniso, zvimwe TsvagaEngine Optimization (SEO) maitiro inowedzera yako customerele base - casino 777 bono sin deposito. Kuwedzera bhizimusi rako kunogona kuva chinhu chakanaka pane chirongwa chekugara kwenguva refu.Zvichida kana kuchinja uku kuchaitika mubhizimisi rako, unoda kugadzirwa kana kuti mhando yemufananidzo wenguva refu. Nyaya dzakawandazvinogona kubuda, izvo zvinowanzoitika kana sangano rimwe nerimwe riri kuchinja. Somugumisiro, kuisa mazano akajeka ekubata nehutano hwakadarozvikwangwani zvinogona kuva basa rakawedzerwa, iro rinofanira kukosha.
Max Bell, Mutengi weKuteresi Achibudirira we Semalt ,anotsanangura zvinhu zvekugadzirwa kwebhizimisi rakabudirira.
Kuronga Kufunga Kunokurudzira Kubatana uye Innovation
Paunenge uchigadzira maitiro, chirongwa chacho chinosanganisira kutsvaga mhinduro uchishandisa gadziriro yakatarwayezvigadziri zvinowanikwa nemutengi. Mhinduro yacho haisi pachena, kubudirira kwayo kunogona kuve kushandiswa kushandisa mamwe mazano ekugadzira pfungwakubatana pakati pemapato ayo akanganiswa nekuchinja. Somuenzaniso, paunenge uchidhinda digital, masangano anogonavanoda kukoka SEO nyanzvi pamwe nekudzidzisa vashandi vavo pane zvishomanana zvekutsvaga michina yekutsvaga kutora vatengi..Munguva yemazuva ano,vazhinji vanotengesa vanobva kuInternet. Izvi zvinoreva kuti mawebsite anotora zvishoma nezvishoma zvikafu zvemuviri.
Kugadzira kufunga kunosanganisira kuisa zvinhu zvose zvesangano kushanda pamwechetekuti agadzirise chimwe chinhu. Inosanganisira kuita pfungwa dzakasiyana-siyana kutarisa imwe nyaya ine chokuita nezveramangwana remhinduro. Pane imwePfungwa, maonero ezvakasiyana-siyana anotarisa kupa bhizinesi ruzivo runokosha rwekushanda kwemangwana. Somuenzaniso, ikushamwaridzana kwe MU / DAI uye SalesForce mukurwisana nemapurisa emvura.
Panyaya iyi, kushevedza muchechi yekambaniki inogona kuva inobatsira. Zvinhu zvizhinjizvekugadzira pamwe nekugadzirisa kune imwe yadhigiramu yedhijita dzinoda dzimwe nyanzvi dzine ruzivo uye ruzivo kuti dzigadzirise nyaya. Semuyenzaniso,Kushanda pamwe chete pakati pevatungamiri vekambani ne SEO makambani zvinogona kutungamirira kumagariro ekanaka kugamuchira webhusaiti, iyo isingogumiridza chete, asiane zvingaita zvekutora shopu. Mukugadzirisa uku, kugadzira kufunga kunofanirwa kubva sezvo kuchinja kungave kusanganisira kuchinjavashandi, zvinyorwa uye zvimwe zvakawanda.
Kugadzira Kufunga nderimwe pfungwa, iyo inogona kubatsira masangano akawanda kurongaramangwana ravo. Inogonesa vanhu vakasiyana-siyana kuti vauye nenzira dzakasiyana uye mhinduro. Kugadzira kufunga kunogona kushanda kune vakawandamabhizinesi, uye zvinowanzoitika kuti vanhu vakasiyana vanozvitora zvakasiyana. Kugadzira kufunga kunobatsira bhizinesi rako kugadzirisa imwe nguva yakarebanyaya pamwe chete nekufamba kubva kune dzimwe dambudziko riripo. Kuchinja vanhu kwakaoma, asi kunogona kuva chinhu chinokosha kune vamwematambudziko. Kugadzira kufunga kunobatsira vanhu kuwana ruzivo rwakasiyana-siyana rwekusika kwekusika pamwe nekuwana imwe yakadzika yekubatirana.Kuburikidza nemazano ari munyaya ino, zvinoita kuti tive nemafungiro akanaka ekufunga kufunga. Inogona kuva yakakosha pakuchinjadigital nzira.